वर्ड फ्ल्यू फैलिन थालेपछि फ्रान्समा मारियो ६ लाख बढी पंक्षी
फ्रान्समा सन् २०१५ देखि वर्ड फ्ल्यूको महामारी आएको र अहिले चौथो चरणको खतरा रहेको बताइएको छ । महामारी फैलिन सक्ने देखिएका क्षेत्रका २६ फार्मका पंक्षी अहिले मारिएका कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुस १६, २०७८ १०:१३
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। फ्रान्समा छ लाखदेखि छ लाख ५० हजारसम्म पंक्षीहरू मारिएको छ । वर्ड फ्ल्यू फैलिन थालेपछि सरकारले शंकास्पद क्षेत्रका कुखुरा, हाँसलगायतका पंक्षीहरू मार्न लगाएको हो । पंक्षीको उक्त सङ्ख्या पछिल्लो एक महिनामा मारिएको सरकारी अधिकारीहरूले शुक्रबार जानकारी दिएका छन् ।
नाटकीय ढंगले प्रचण्ड‒ओली फेरि एक हुदैँछन्, चीनले फाल्यो अन्तिम अस्त्र !
सुरक्षा अधिकारीबीच बैठक नेपाल र भारतका : दोहोरो नागरिकतामाथि निगरानी हुने
नेपालमा एमसीसी रोक्न चीनले यतिसम्म गरिरहेको खुलासा, अब अमेरिका के गर्ला ?
फ्रान्स जस्तै अरु धेरै युरोपेली देशहरूमा पनि अहिले वर्ड फ्ल्युको महामारी आउने खतरा देखिएको छ । कोरोनाभाइरसको महामारीले मानिसलाई त्रसित पारिरहेकै बेला वर्ड फ्ल्यू भाइरसको महामारीले पीडा थपेको हो ।